सेयर बजार सुस्ताउँदा पनि राज्यले कसरी पायो बढी लाभकर ? - Laltin Media
Home»सेयर बजार»सेयर बजार सुस्ताउँदा पनि राज्यले कसरी पायो बढी लाभकर ?
सेयर बजार सुस्ताउँदा पनि राज्यले कसरी पायो बढी लाभकर ?
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सेयर बजारका लगानीकर्ताबाट सरकारले ९ अर्ब २८ करोड ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै पुँजीगत लाभकर उठाएको छ । यो कर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अधिक हो । एकातिर पुँजी बजार सुस्ताउँदै गएको छ । अधिकांश लगानीकर्ता घाटामा छन् । तर पनि गत वर्षभन्दा लाभकर भने बढेको छ । यसको विपरीत गत वर्ष यतिबेला नेप्से बजार बुलिस ट्रेन्डमा थियो ।
तर पनि गत वर्षभन्दा अहिले नै लाभकर धेरै संकलन भएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर वृद्धि गर्नु हो । सीडीएससीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात फगुन मसान्तसम्ममा ९ अर्ब २८ करोड ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै हो ।
किनभने गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म कुल ७ अर्ब १९ करोड ५९ लाख ८९ हजार रुपैयाँमात्र पुँजीगत लाभकर उठेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै ३ अर्ब २४ करोड ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठेको थियो । फागुन महिनामा ४१ करोड ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षभरीमा भने सरकारले कुल १४ अर्ब १३ करोड ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट अल्पकालीन कारोबारी र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक–फरक पुँजीगत लाभकर लागू गरेको थियो । सेयर किनेको एक वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गर्ने अल्पकालीन कारोबारीले लाभकर बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण पनि ८ महिनाको अवधिमा सेयर बजार सुस्ताए पनि लाभकर बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक घटेसँगै कारोबार रकममा पनि ह्रास आएको छ । तर लाभकर दर परिवर्तन भएकाले गत वर्षभन्दा समग्रमा बढी नै भएको हो।
सेयर बजारबाट आउने पुँजीगत लाभकरमार्फत सरकारलाई राम्रै आम्दानी हुने गरेको देखिन्छ । तथापि, सरकारले पुँजी बजारलाई भने खासै वास्ता नगरेको सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सीडीएससीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५० लाख ६४ हजार जनाभन्दा धेरैले डिम्याट आकाउन्ट खोलेका छन् । यसरी पुँजी बजारप्रति बढ्दो आकर्षणलाई नियामक निकायले बारम्बार नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र तिर्नुपर्ने यो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा फरकफरक दर लागू भएको हो ।
सरकारले पुँजीगत लाभ करमा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १ वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीलाई ७.५०% र १ वर्ष भन्दा बढी अवधि होल्ड गर्नेलाई ५% लाभकर लाग्नेछ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने १०% पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ ।
धितोपत्र लगानीकर्ताले भारित औसत लागतका आधारमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नु पर्दैन । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ ।